Xelela i-CRA Xa Uhamba
Xa usuka, kufuneka uxelele i- Arhente yeRevenue Revenue Agency ngokukhawuleza.
Ukugcina idilesi yakho ngokukhawuleza kuya kuqinisekisa ukuba uyayifumana imali yentlawulo yengeniso yakho kunye neentlawulo zentlawulo, kubandakanywa iintlawulo zephondo, ezifana neentlawulo zeentengo ze-GST / HST, iintlawulo zentlawulo yoncedo lwabantwana, ukuhlawulwa kwentlawulo yengeniso yabantwana kunye ne-tax revenue tax iintlawulo, ngaphandle kokuphazamiseka.
Awukwazi ukutshintsha idilesi yakho njengoko usebenzisa iNETFILE ukufakela irhafu yakho yentlawulo kwi-intanethi. Ulwazi lomntu siqu aludluli kunye nokubuyiswa kwe-intanethi. Utshintshe idilesi yakho phambi kokuba uhambise irhafu yengeniso yakho ye-NETFILE.
Kukho iindlela ezininzi zokwazisa i-CRA yenguqu yakho yenguqu.
Sebenzisa iNkonzo yeRhafu yeAkhawunti .
Biza i-Individual Income Tax inquiries inkonzo ye-1-800-959-8281.
Gcwalisa ifom ye sicelo soTshintsho lweekheli
Unokwenza uprinte uze uzalise ifomu yesicelo sokutshintsha idilesi uze uyithumele kwirejista efanelekileyo efakwe kwizantsi kwefomu.
Ungawugcwalisa kwi-intanethi, uze uyisindise ukuyifaka okanye uyiprinte, uyisayine uze uyithumele kwiziko lakho zerhafu, ngokulandela imiyalelo ye-CRA.
Bhala okanye ufeksi i-CRA
Thumela ileta okanye ifeksi kwiziko lakho lentela ye-CRA. Faka ifayinitsha yakho, inombolo yomshuwalense yentlalo , idilesi endala kunye entsha kunye nomhla wokuhamba kwakho.
Ukuba uquka abanye abantu ekutshintsheni kwakho idilesi yesicelo, njengeqabane lakho okanye iqabane elingatshatanga, qiniseka ukufaka ulwazi kumntu ngamnye kwaye uqinisekise ukuba umntu ngamnye uyayibonakalisa ileta ukuze igunyaze utshintsho.
IJografi yeSouth Sudan
Iindaba zeFrentshi Iigama - Le vocabulaire de l'actualité
Iintlobo zeeNgoma eziphezulu zeFingerpicking
I-quirky Quiz kwiilwimi zesiNgesi
Ukuguqula iiNtloko zeCubic ukuya kwiLitha
Iindwendwe ezili-10 ezihamba phambili zeNdlela zokuThuthukisa umgwaqo omkhulu
UKumkani Francis I waseFransi
Izixhobo - Umlilo, uMhlaba, uMoya kunye namanzi